दिवंगत नेता ओलीप्रति नेकपाको श्रद्धाञ्जलि
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दिवंगत नेता उत्तरकुमार ओलीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको छ । गत माघ २५ गते बुटवलबाट दाङतर्फ जाँदै गर्दा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को चिसापानीमा सावारी दुर्घटनामा घाइते भएका दाङ क्षेत्र नं. ३ प्रदेश नं. २ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य ओलीको बिहीबार राति २ बजे उपचारका क्रममा ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
नेकपाको सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कार्यदल भंग
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कार्यदल भंग गरेको छ । शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले एकीकरणका बाँकी काम सवै सचिवालयलेनै गर्ने गरी कार्यदल विघटन गरेको हो ।
नेकपा बैठकमा एकीकरणका लागि कार्यदलले दिएको सुझावमाथि छलफल शुरु
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को साङ्गठनिक एकीकरणका लागि गठित कार्यदलले सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा साङ्गठनिक एकता गर्नका लागि गठित कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले अहिलेसम्म गरिएका कामको प्रतिवेदनसहित सुझाव पेश गरिएको जानकारी दिए ।
नेकपा सचिवालयको बैठक सम्पन्न, कार्यदलको म्याद थप गर्नुपूर्व सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको म्याद थप गर्नुपूर्व सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा नेता रामबहादुर थापा बादलले प्रतिवेदन पेश गर्दै थप कामका लागि निर्देशन माग गरिएको छ ।
पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने विषयमा बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरु
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । पार्टी एकतालाई पूर्णता कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल हुने नेताहरुले जनाएका छन् । पार्टी एकता भएको लामो समय भइसक्दा पनि एकता प्रकृयाले पूर्णता नपाउँदा कार्यकर्ताहरु अलमलमा परेका छन् । जसको कारण नेताहरुबीच विवाद पनि देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम नेपालमा यस्तो छ खुराफातको खेती, मन्त्रीको अश्लिील भिडियो तरंग
काठमाडौँ । हिन्दीमा एउटा उखान छ ‘खाली दिमाग शैतानको घर’ जब मान्छे खाली हुन्छ तब उसले अनेक खुराफाती गर्न थाल्छ । त्यस्तै खुराफातले गर्दा नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा लफडा आइलागेको छ ।
यसरी पंगु बन्यो नेकपा कार्यदल
काठमाडौँ । अन्ततः पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व सचिवालयको काँधमा आइपुगेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको एकता टुंगो लगाउन बनाइदिएको कार्यदलले समससीमा पार गरिसक्दासमेत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि सांगठनिक एकता पूरा गर्ने दायित्व सचिवालयको काँधमा आएको हो ।
किन पंगु बन्यो नेकपा कार्यदल?
काठमाडौँ । अन्ततः पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व सचिवालयको काँधमा आइपुगेको छ ।